Seenaa Qalbii Nama Hawwatu! – Beekan Guluma Erena
Seenaa Qalbii Nama Hawwatu!	Beekan Guluma Erena
Education April 9, 2016April 9, 2016	0 Comment
Namicha akka malee rakkataa tokkotu ture. Namichi kuni waan nyaatus, waan uffatus hin qabu. Rakkoon gar malee itti heddummaannan eddoo itti dhalate dhiisee hojii barbaadachuuf biyya biraa deeme. Biyya deeme sanitti daandirra taa’ee kadhachaa, darabaa mana namaa jala bulaa jiruu isaa dhiibuu eegale. Osoma haala kanaan jiruu guyyaa tokko mana nama dureessa wahiitti hojii waardiyyummaa argatee qacarame. Warri manaa qabeenya guddaa waan qabaniif namichi kuni nyaataa, dhugaatiifi uffataaf wanni inni rakkatu hin jiru. Amala gaarii waan qabuufis suuta suutaan warraan wal baratee jaalala argachaa dhufe.
Yeroo muraasa booda Abbaan manaa lubbuun isaa dabre. Sana booda dallaa sana keessa isaafi haadha manaa qofa ta’anii jiraachuu eegalan. Isheenis amala isaa argite waardiyyummaarraa gara manaa ol galchite kutaa tokko kenniteef.
Walii galteen isaanii cimaa adeemuu isaatiin, yeroo muraasa booda Abbaa Warraaf haadha warraa ta’anii jiraachuu akka danda’an itti himtee, qabeenya qabdu hundaa akka too’atu aangoo kenniteef. Waan hundaa erga harkaan geettee booda, gara kutaa tokkoo isa waamtee…
Ilaali qabeenya koo hundarratti ajajaan sihi, garuu saanduqa tana qofa tuquu hin dandeessu jetteen
Innis jiruu gadadoo hammas ga’u irraa sadarkaa kana ga’uu isaatiif baay’ee gamaadee waan haati warraa jetteen fudhatee hojii isaa haala gaarii ta’een hojjachuu itti fufe.
Ajajaa qabeenya guddaa ta’ee, jiruu qananii keessa bashannanaa jiraachun isaaf waan tasumayyuu hin yaadamne ture. Har’a garuu sadarkaa kaleessa irra turerraa ka’ee akkuma biyya saniitittuu namoota kabajamoo ta’anii maqaan isaanii eddoo adda addaatti kaafaman keessaa angafa ta’e.
Yeroo muraasa booda garuu, qalbiin isaa waan tokko irra deddeebitee isa gaafachuu eegalte. Namtittiin kuni qabeenya kana hunda erga too’annoo koo jala galchitee maalif saanduqa sana hin tuqin naan jette jedhee yaaduu eegale. Ganamas galgalas waanuma kanaaf dhippachuutti ka’e. Tarii kan saanduqicha keessa jiru Diyaamandii Yookin Meerkurii ta’uu hin oolu jedhee shakke
Haadha manaa isaa waliinis walitti bu’iinsa keessa galuu eegale. Irra deddeebi’ee waan saanduqa sanaa yoo gaafatu ~ hadaraa kee gaafii waan saanduqa kanaa natti hin kaasin, itti hin kalaayin siin jedheeraa itti hin kalaayin jetteen. Irra deddeebitee akkana jechuun ishee daran gaafii itti uumee, saanduqa kana banuun qaba jedhee murteeffate.
Haati manaa isaas erga baay’ee obsitee booda, tolekaa , erga sanduqa kana banu malee jettee jaarsota biyyaa baafnee dubbii tana nuu haa ilaalanii jetteen. Innis gammachuu guddaadhaan tole, jedhee jaarsonni walitti qabaman. Booda lamaan isaanituu waan uumame jaarsotatti himatan.
Isheen, yeroo dhumaatiif gaafii tokko gaafatte…!
Sanduqni kuni yoo baname anaafis siifis gaarii hin ta’u, haa banamuu guutumaan guututti murteessitee jettee gaafatte! Osoo jaarsonni dhagayan, ‘maali wanni ati na dhoksitu, eeyyen wanni gale haa galu haa banamu’ jedheen… Jaarsonnis erga dubbicha gamaafi gamana ilaalanii saanduqni banamuun isaa rakkoo hin qabu jedhanii ~ tolegaa erga walii galtan haa banamuu jedhanii murteessan.
Ergasii… Furtuu saanduqichaa ummata jidduutti itti kennite. Innis fuula gammachuudhaan cululuqeen ol ka’ee sanduqicha bane.
Saanduqicha yoo banuu wanti inni arge waanuma inni guyyaa tokko hin yaadini. Lan saanduqicha keessa ture ~ Uffata Isaa Sharshara, Bututaa Gaafa Biyya isaa irraa fidatee dhufe sana ture! Namtittiin karaa irraa kaastee, nama isa goote suni uffata isaa guyyaa inni qacaramu irraa baaste sana ~ tarii akka namtichi kuni guyyaa tokko of hin daganne jettee achi keette. Eegaa, furtuu qabeenya kootii harkaa qabdu hunda naa deebisi jetteenii, uffata inni uffates irraa mulqisiistee, jaarsota jiddutti Sharshara isaa waliin gaggeessite. Ilmoon namaa kuni yoo qanani’u waan deegu hin seeyu. Yoo deeges waan qanani’u hin seeyu. Marumaafuu, seenaa kanarraa waan tokko akka barattan abdiin qaba. Waanuma ta’es ta’u namni waan keessa dabre dagatuu hin qabu. Namni kaleessa ofii hin beeyne egeree ofiitif waan gaarii tokko hojjachuu hin danda’u.
Salphinaafi Kofoo Abbaatu Ofirratti Qaba✍
Fuula Feesbuukii Keenya ❤Like Share ❤Godhuu Hin dagatinaa ~ Galatoomaa!
← MAQAATU SIRRA BA’E
NUUNNUU fi ADAREE →